ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့မှ ၄ကြိမ်မြောက် စုပေါင်း ဘုံကထိန်ပွဲတော်. ~ ဒီမိုဝေယံ
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့မှ ၄ကြိမ်မြောက် စုပေါင်း ဘုံကထိန်ပွဲတော်.
(ဓာတ်ပုံများ ဦးသန်းဝင်း-အားကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါသည်)
(နိုဝင်ဘာ ၁၀ရက်နေ့)က ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ ရောက် မြန်မာမိသားစုများမှ (၄)ကြိမ်မြောက် စုပေါင်းဘုံကထိန်ပွဲအား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်..။
ဂျပန်နိုင်ငံမှ တိုကျို၊ နာဂိုယာ၊ ကျူးရှုးမြို့များမှာ သီတင်းသုံးနေသည့် ဆရာတော် သံဃာတော်များ အပါအဝင် မိတ္ထီလာ၊ သံလျင်၊ ရန်ကုန်နှင့် မြိတ်မြို့များမှ ခေတ္တကြွရောက် တော်မူကြသည့် ဆရာတော် သံဃာတော် (၉)ပါးအား ဘုံကထိန်ခင်း ဆပ်ကပ်လှူဒါန်း ပူဇော်ခဲ့ကြပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာမိသားစု ၁၀၀ကျော်ခန့်က ဆွမ်းစုပေါင်း ဆပ်ကပ် ပူဇော်ခဲ့ကြပြီး ကထိန်တရား အနုမောဒနာ နာယူခဲ့ကြသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာမိသားစုရဲ့ စုပေါင်းကထိန်အလှူ နတ်လူသာဓု ခေါ်စေသော်။